Mayelana Nathi - Beijing Multifit Electrical Technoloty Co., Ltd.
I-BEIJING MULTIFIT ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. isitshalo sobuchwepheshe obuphezulu esizinikezele ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukukhiqizwa, ukuthengiswa nokwakhiwa kwezitshalo zamandla e-photovoltaic zamandla elanga namanye amandla aluhlaza,Ikomkhulu e-Beijing, isizinda sokukhiqiza sise-Guangdong Shantou High-tech Development Zone.
Sigxile ekuthuthukisweni kobuchwepheshe, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokuhlanganiswa kohlelo lwamarobhothi okuhlanza amaphaneli elanga, izimpahla zokuguqula amandla, izinhlelo zokukhanyisa umgwaqo welanga le-LED kanye nemikhiqizo esekelayo, Ukuklama, ukuthuthukiswa, ukutshalwa kwezimali, ukwakhiwa, ukusebenza nokugcinwa kwamaphrojekthi wesistimu yamandla elanga kanye amaphrojekthi kagesi ezishintshayo.
I-Multifit yasungulwa ngo-2009, Ngokusekelwe ekunikezeni izitshalo zamandla e-photovoltaic ezisezingeni lomhlaba ukuze zixazulule izakhamuzi kanye nocwaningo olusha nokuthuthukiswa kwemikhiqizo kagesi yamandla avuselelekayo, sihlakulele iqembu labadayisi kanye namaqembu e-R&D anemibono, isipiliyoni nobuchwepheshe. Umkhiqizo uthole izitifiketi zelungelo lobunikazi ezingaphezu kweziyi-10.Imikhiqizo yethu igunyazwe abathengi abahlukahlukene futhi bajabulela idumela elihle phakathi kwabo.Manje isithunyelwe eYurophu, eMelika, e-Asia, e-Afrika naseLatin America nakwezinye, kunezingaphezu kuka-50 amazwe nezifunda emhlabeni.asilokothi siyeke ukuzama konke okusemandleni ethu Ukunyathela intaba yobuchwepheshe yamandla kagesi ezindaweni eziphakeme futhi sithuthukise ukwaneliseka nokuqwashisa kwekhasimende.
Ikusasa, iMultifit izibophezele ekuthuthukiseni imboni yamandla avuselelekayo, futhi iyaqhubeka nokuthuthukisa izixazululo zelanga ezisebenza kahle nezingabizi kakhulu ukuze ilethe okuluhlaza nogesi okwengeziwe ezimpilweni zethu.Ngokusekelwe embonini ye-photovoltaic, Lwela ukwakha inkampani ibe yindawo ehlonishwayo yokuqala- ibhizinisi photovoltaic class.
Injongo: Ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, vumela abantu abaningi bajabulele amandla aluhlaza.
Amanani: Ukuqina nokugxila, ukuxhumana nokubambisana, umthwalo wemfanelo nokwethembeka, ukukhuthala kanye nokusungula izinto ezintsha
Umbono: Gxila kubuchwepheshe be-inverter ye-civil kanye neyokuhweba kanye nesisombululo esihlakaniphile. iyaqhubeka nokuthuthukisa izixazululo zelanga ezisebenza kahle kakhulu nezingabizi ukuletha ugesi oluhlaza kakhulu ezimpilweni zethu.
Isiqubulo: Ngiyawujabulela umsebenzi.
Inkampani yethu inamathela emkhankasweni wokuthuthukiswa "wokonga amandla ngendlela efanele, vumela abantu abaningi bajabulele amandla aluhlaza", okusekelwe embonini ye-photovoltaic, futhi ilwela ukwakha inkampani ibe yibhizinisi elihlonishwayo lokuqala le-photovoltaic power generation.
Ukuhambisana nomqondo othi "impumelelo yesisebenzi ngasinye impumelelo yenkampani", inkampani ibheka abasebenzi njengezinsiza ezibaluleke kakhulu kanye nengcebo ebaluleke kakhulu yenkampani, inikeza abasebenzi izinzuzo zokuncintisana zeholo, izinzuzo zezenhlalakahle nokufunda. kanye namathuba okuqeqeshwa, futhi silwele ukudala indawo enhle yokukhula kwethalente, ukuze inkampani ibe yindawo yethalente, ithalenta, ithalente, ithalente. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi inkampani idinga ukuba nesimo samasiko ebhizinisi esiqashelwa yibo bonke abasebenzi, isu elicacile lebhizinisi, imigomo ecacile yentuthuko, isimo sokusebenza esixegayo nesivumelanayo, imivuzo kanye nezijeziso uhlelo lokusebenza olucacile, olungashukumisa ngokugcwele amandla amakhulu abasebenzi, ukuze ukuzuza impumelelo ekabili yomsebenzi womuntu siqu kanye nowebhizinisi.